नेकपाद्धारा नेकपामाथि नै सर्वोच्चमा रिट दायर, २४ गते पेशी तोकिएपछि ओली प्रचण्ड परे तनावमा! -
नेकपाद्धारा नेकपामाथि नै सर्वोच्चमा रिट दायर, २४ गते पेशी तोकिएपछि ओली प्रचण्ड परे तनावमा!
२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार २०:४४ 273 पटक हेरिएको
काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नामलाई निर्वाचन आयोगले बैधानिकतादिएको विरोधमा सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल नेतृत्वकोनेकपाले सर्वोच्च मा रिट निवेदन दायर गरेको हो।
आयोगले गत असोज ९ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकतापछि बनेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई वैधानिकता दिएको थियो । सो निवदेनमाथि यही मङ्सिर २४ गते पेशी तोकिएको छ ।